Ebe ọ bụ na ntọhapụ nke Final Cut Pro X 10.1, m email ka gbawara na ajụjụ - na, ọ eleghị anya ga-iju ka onye ọ bụla na-amụta na media management bụ nọmba otu na ndepụta. Ya mere, ebe ya bụ azịza nye nkịtị ajụjụ, ha na ụfọdụ "ihe nzuzo Atụmatụ" na-eme ka na-arụ ọrụ ọba akwụkwọ mfe. Nke a bụ nke mbụ n'ime anọ isiokwu na media management. Ebe a na-atọ ndị nke ọzọ:
Jikwaa Projects: http://www.larryjordan.biz/fcp-x-10-1-manage-projects/
Njikọ Aka: http://www.larryjordan.biz/fcp-x-10-1-collaboration/
Back-elu na Weghachi: http://www.larryjordan.biz/fcp-x-10-1-backup-and-restore/
Apple enyewokwa ọzọ ihe onwunwe na abụọ na-acha ọcha akwụkwọ:
FAQ banyere emelite na-arụ ọrụ na ọba akwụkwọ: http://support.apple.com/kb/HT5958
Media Management White Akwụkwọ: http://images.apple.com/final-cut-pro/docs/Media_Management.pdf
A Library bụ a akpa na esetịpụ media, ihe, na oru ngo. Ị nwere ike na-akparaghị ókè ọnụ ọgụgụ nke ọba akwụkwọ na-emeghe na ozugbo na i nwere ike imeghe na nso ọba akwụkwọ dị ka mkpa. Final Cut achọ a kacha nta nke otu n'ọbá akwụkwọ ga-emeghe mgbe niile.
IHE: Ọ bụ ezie na kọmputa na-eji ngwa ngwa SSD na Fusion draịva, m ka na-nwere ike ikwu na ọbá akwụkwọ na media ike ịchekwa na a ngwa ngwa abụọ mbanye ma ọ bụ wakporo. M ikpe, m na-echekwa m niile ọba akwụkwọ na ihe mmasị thunderbolt wakporo.
Ihe na-nchekwa na-ẹdude n'ime ọbá akwụkwọ. A n'ọbá akwụkwọ ga-ebu dịkarịa ala otu ihe omume. E nweghị ịgba ka ọnụ ọgụgụ nke ihe na ike ga-ẹdude ke otu n'ọbá akwụkwọ. Ihe kacha ụzọ na-eche echiche nke ihe omume bụ na ọ bụ a na nchekwa, ma ọ bụ biini, na-echekwa stof.
IHE: Na mbụ nsụgharị nke Final Cut Pro X, e a ịgba nke banyere 2,000 mkpachị na ike-echekwara na ihe omume. Na ịgba e, nnoo, ẹfep.
Projects bụ ntụziaka na-esi dezie anyị mkpachị; ha bụ ugbu a analogous usoro na Final Cut Pro 7.
Media na-echekwara na ọba akwụkwọ, ma ọ bụ referenced site ọba akwụkwọ, na ike ga-akpali ma ọ bụ depụtaghachiri n'etiti oru ngo, ihe omume, ma ọ bụ ọba akwụkwọ.
-Arụ ọrụ na ọba akwụkwọ
Imeghe a n'ọbá akwụkwọ, họrọ File> Open Library na họrọ si na-adịbeghị anya n'ọbá akwụkwọ ndepụta.
Imeghe a n'ọbá akwụkwọ na-adịghị na ndepụta, họrọ File> Open Library> ọzọ. Nke a na-egosiputa a ndepụta niile ọba akwụkwọ na Final Cut maara banyere.
Imeghe a n'ọbá akwụkwọ na ị maara dị adị, ma Final Cut adịghị egosipụta na ya ndepụta nke ọba akwụkwọ, pịa Chọpụta button na ala n'akụkụ aka ekpe. Họrọ n'ọbá akwụkwọ na ị chọrọ emeghe si File onye na-atụtụ window na-egosi.
Iji na ikpochapụ ndesịta nke na nso nso meghere ọba akwụkwọ, họrọ File> Open Library> Clear Recents. Ndepụta a birighachi dabeere na ọba akwụkwọ na ị na ma reopen ma ọ bụ mepụta.
Iji na-emechi a n'ọbá akwụkwọ, họrọ n'ọbá akwụkwọ ị chọrọ imechi, mgbe ahụ, na-eme otu n'ime ndị na-esonụ:
Họrọ File> Nso Library [aha]
Right-pịa ebe ọ bụla na Libraries ndepụta ma họrọ Nso Library [aha]
Nzuzo n'ọbá akwụkwọ Atụmatụ
Imeghe Final Cut na otu n'ọbá akwụkwọ họrọ, nri-pịa Final Cut na akara ngosi na n'ọdụ ụgbọ mmiri na họrọ n'ọbá akwụkwọ na ị chọrọ họrọ mgbe FCP ga-emepe.
IHE: All ọzọ na-emeghe ọba akwụkwọ ga-emeghe mgbe ị na-eji nke a n'ọnụ.
Imeghe Final Cut na naanị otu n'ọbá akwụkwọ na-emeghe, n'agbanyeghị otú ọtụtụ ọba akwụkwọ ndị na-emeghe mgbe ị ikpeazụ ịkwụsị Final Cut, pịa ma jide nhọrọ isi dị ka FCP ga-emepe. Mgbe ahụ, họrọ n'ọbá akwụkwọ na ị chọrọ na-emeghe na ndepụta.
IHE: Ị gaghị na-emechi ikpeazụ fọdụrụ emeghe n'ọbá akwụkwọ n'ime Final Cut. Iji na-emechi a n'ọbá akwụkwọ na ị na-adịkwaghị chọrọ, na-emeghe a dị iche iche n'ọbá akwụkwọ, nke mere na e nwere mgbe otu emeghe ọbá akwụkwọ FCP.
Final Cut Pro X mgbe niile na-achọ dịkarịa ala otu n'ọbá akwụkwọ, nwere dịkarịa ala otu ihe omume na-emeghe. Imeghe FCP na ihe efu Ọbá akwụkwọ na omume (na ndị ọzọ nile ọba akwụkwọ emechi), pịa ma jide Option isi mgbe amalite FCP si n'ọdụ ụgbọ mmiri na pịa New button na ala n'akụkụ aka ekpe.
Cheta, ọba akwụkwọ nwere ike aha ya bụ ihe ọ bụla na echekwara n'ebe ọ bụla.
IHE: N'ihi na ọba akwụkwọ nwere mgbasa ozi na-aza faịlụ, ijide n'aka na-echekwa ndị a na a elu-ọsọ nchekwa na ngwaọrụ. Ma, m ka na-nwere ike ikwu bụghị ịchekwa media ka buut mbanye.
Imeghe a kpọmkwem n'ọbá akwụkwọ, abụọ-pịa n'ọbá akwụkwọ na akara ngosi na Finder.
Ọ bụrụ na ị abụọ-pịa a n'ọbá akwụkwọ, ọ ga-atụkwasịkwara ẹdude ọba akwụkwọ n'ime Final Cut.
Ọ bụrụ na ị nhọrọ-abụọ-pịa a Ọbá akwụkwọ, Final Cut ga-egosipụta "Buru a Library" ndepụta. Pịa Kagbuo bọtịnụ na FCP ga-emeghe na naanị na n'ọbá akwụkwọ.
Ọ bụrụ na FCP bụ ugbua oghe, abụọ-ịpị a n'ọbá akwụkwọ faịlụ na Finder na-agbakwụnye na ọbá akwụkwọ ahụ na-emeghe ọba akwụkwọ ama egosipụta na Final Cut Pro X.
Nkwado ndabere na mpaghara a Library nchekwa data, na-aga Final Cut Pro> Mmasị> General-eme ka n'aka Library backups agbanwuru. Nke a defaults ka ịchekwa backups gị Home ndekọ. Ị nwere ike ezipụta ebe ọzọ si mmapụta menu.
IHE: Nke a ndabere na-agụnye backups nke ọ bụla oru ngo na omume nchekwa data ẹdude ke na n'ọbá akwụkwọ. Ọ na-adịghị ndabere media. A na-eme archiving n'ọbá akwụkwọ data mfe, n'ihi na ị na-adịghị mkpa ndabere media ẹdude ke n'ọbá akwụkwọ, dị nnọọ na nchekwa data.
Site na ndabara, Ọbá akwụkwọ backups na-echekwara na: [Home ndekọ]> Movies> Final Cut Pro Backups. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọbá akwụkwọ nchekwa data bụ na nnukwu. (N'aka nke ọzọ, ndị a na-adịghị nnukwu oru ngo.) Backups na-mere ọ bụla 15 nkeji.
Iweghachi ọba akwụkwọ si backups
Na Libraries ndepụta, họrọ n'ọbá akwụkwọ na ị chọrọ iji weghachi ma họrọ File> Open Library> Site ndabere.
Ke "Weghachi si" popup menu, họrọ ndabere ụbọchị na oge ị chọrọ iji weghachi si. Ma ọ bụ, pịa ọzọ, iji họrọ a dị iche iche ndabere faịlụ. Nke a ndabere faịlụ a kwukwara dị ka a n'ọbá akwụkwọ na Libraries ndepụta.
IHE: The backups bụ ọkọlọtọ Final Cut Pro n'ọbá akwụkwọ faịlụ, otú i nwere ike na-emeghe ha site abụọ-na ịpị ha na Finder.
Libraries bụ bundles
Libraries-eme dị ka a faịlụ, ma ha bụ n'ezie a ùkwù. Right-pịa a n'ọbá akwụkwọ aha ke Finder na họrọ Gosi ngwugwu ọdịnaya.
N'ime, ị ga-ahụ nchekwa nwere niile ihe, oru, snapshots, mgbasa ozi, na yiri faịlụ. (Nke a bụ ọhụrụ incarnation nke ochie Final Cut ihe na Final Cut Projects nchekwa.)
M ike ikwu na ị gaghị ọgbaghara na faịlụ n'ime a nchekwa maka ihe ọ bụla oru ngo ị na-eche banyere. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ka ohere media ma ọ bụ oru ngo faịlụ, nke a bụ ebe anya.
Ihichapụ a n'ọbá akwụkwọ
Libraries apụghị-ehichapụ n'ime Final Cut. Apple mere mkpebi a iji gbochie mberede erasure niile anyị na-arụ ọrụ. Ka ihichapụ n'ọbá akwụkwọ, họrọ ya na Finder na ihichapụ ya ka ọ bụla ọzọ faịlụ.
Ozugbo ị-eji na-arụ ọrụ Libraries, ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị media management hassles na anyị nwere na-edozi na n'oge gara aga na-ugbu a na-arahụ.
Ọ bụrụ na ị na-dị nnọọ ịlụ malitere, ijide n'aka na-Detuo ha niile dị media n'ime a n'ọbá akwụkwọ. Nke a ga-dịkwuo ego nke nchekwa ị na-eji n'ihi na gị oru ngo, ma ọ dị mfe backups na budata belata gị mgbasa ozi management isi ọwụwa.
> Resource> FCP> Jikwaa Libraries na Final Cut Pro X